Indawo yokuhlala ka-Elena
Ifulethi elitofotofo elinombono wolwandle. Imizuzu esi-7 ukusuka elunxwemeni, imizuzu emi-3 ukusuka kwithaveni ekufutshane kunye nemizuzu emi-3 uhamba ukusuka kwivenkile ekufutshane.
Le spa iphelele e-Evia inemithombo engaphezu kwama-80 yobushushu obahlukeneyo kwindawo apho uhlaza oluchumileyo lukhula kanye elwandle.
Ukuhamba uyonwabile ecaleni komlambo eLoutra Edipsos kuya kukukhokelela ngqo ekujikeni kwenkulungwane edlulileyo. Uyilo loyilo lwexesha olukujikelezile; yonke into engekhoyo ziilokhwe ezinde, ukuphithizela kunye neminqwazi ephezulu yakudala. Eso sakhiwo sibomvu, iZiko le-Agioi Anargyroi Hydrotherapy elidala kumbindi wedolophu, ngumsebenzi kaZiller, umakhi wenkulungwane ye-19.
Unokujonga kwakhona iibhafu kunye nemiqolomba ye-Roman General Sulla, enye yezona zinto zinomtsalane kwindawo, ebekwe ngasemva kwezibonelelo ze-hydrotherapy zoMbutho wabaKhenketho weSizwe. Kwaye emva koko uphume kwi boardwalk yehotele yaseKyma ukuze ufumane umbono omlingo wokutshona kwelanga phezu kwegophe.
Iimpawu zonyango zala manzi zaziyimpembelelo yentsomi. Intsomi yamandulo yamaGrike ithi uthixokazi uAthena wacela umntakwabo uHephaestus ukuba enze imithombo yaseAidipsos, ukuze iqhawe lakhe elithandwayo uHercules aphumle apha emva komsebenzi wakhe ngamnye. Kwakhona kubhalwe ukuba uthixokazi uHera wacebisa uDeucalion noPyrrha ukuba bahlambe emanzini afudumeleyo ukuze bavelise abantwana abaninzi nabasempilweni. Kungekudala emva kokuba uPyrrha ezele uHellen, ukhokho wasentsomini wamaHellenes.
Inombolo yomthetho: 00001013088
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Loutra Edipsou